आईजीपीसँग सांसदको आक्रोशः कुखुरा चोरलाई बलात्कारी भन्ने ? – www.agnijwala.com
आईजीपीसँग सांसदको आक्रोशः कुखुरा चोरलाई बलात्कारी भन्ने ?
मंसिर – प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको विषयमा सांसदहरुलाई जवाफ दिएका छन् । संसदको दीगो विकास तथा सुशासन समितिमा सांसदहरुले कुखुरा चोरलाई ल्याएर बलात्कारी भन्ने ? प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले कुखुरा चोर सँधै कुखुरा चोर मात्र नरहने बताए ।
उनले भने, ‘कुखुरा चोर सधैं कुखरा चोर मात्र रहँदैन गलत मान्छेलाई ल्याएर प्रहरीले केही गर्ने छैन ।’
साथै आईजीपी खनालले हत्यारा पत्ता लगाउन प्रहरी रातदिन खटिँदै आएको बताए । उनले हत्यारा खोज्ने चिन्ताले प्रहरीलाई निन्द्र नलाग्ने समस्या आएको बताए ।
‘हत्यारा पत्ता लगाउन रातदिन खटिएका छौं, जसका कारण निन्द्रापनि नलाग्ने अवस्था छ’, आइजीपी खनालले भने, ‘हाम्रो सामथ्र्यले जति सकिन्छ त्यति गरिरहेका र्छौं ।’
निर्मला प्रकरणका विषयमा बाहिर अनुसन्धानलाई प्रभावित पर्ने गतिविधि भइरहेको भन्दै भन्दै उनले असन्तुष्टि पोखे । ‘बाहिर अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने काम भइरहेका छन् त्यो नभइदिए हुन्थ्यो ।’
निर्मला प्रकरणको अनुसन्धानमा कसको दबाब छ भन्ने सांसदहरुको प्रश्नको आइजीपी खनालले प्रतिवाद गरे । ‘अनुसन्धानमा कसैको प्रेसर छैन, प्रेसरले प्रभावित पनि हुँदैन प्रहरी’ सांसदहरुको प्रश्नको जवाफमा आईजीपी खनालले भने ।
अनुसन्धानमा के कति प्रगति भएको छ कहिले पत्ता लाग्छ ? भन्ने सांसदहरुको प्रश्नमा आईजीपी खनालले भने,‘अनुसन्धानमा डिस्टिङ्सन वा फस्र्ट डिभिजन आयो भन्न सकिँदैन पक्राउ परेपछि अभियुक्त एकैपटक सार्वजनिक हुन्छ ।’